Waxaa la sii daayay nooca cusub ee LiVES 3.0 tifaftiraha fiidiyowga aan tooska ahayn | Laga soo bilaabo Linux
Toddobaadkii hore ayaa la soo saaray nooca cusub ee tifaftiraha fiidiyowga ee aan tooska ahayn ee 'LiVES 3.0', nooca ku jira horumariyayaashu waxay sameeyeen dib-u-qorista lambarka Halka cusbooneysiintan muhiimka ah, LiVES Video Editor ay ujeedadeedu tahay in sifiican loo ciyaaro, laga fogaado shilalka aan loo baahnayn, duubista fiidiyowga oo la wanaajiyo, iyo in la soo dejiyo fiidiyowga internetka oo faa iido badan leh.
Kuwa aan ka warqabin LiVES, waa inay ogaadaan inay tani tahay nidaam dhammaystiran oo fiidiyow ah, hadda lagu taageerayo nidaamyada iyo aaladaha badankood. Ku nool twuxuu awood u leeyahay inuu wax ka beddelo fiidiyowga waqtiga dhabta ah, marka lagu daro saameynta guuleysiga, dhammaantood hal codsi.
Waxay leedahay astaamaha lagama maarmaanka u ah inay u qalanto qalab xirfadeed, sameynta tusaale ahaan fiidiyowyo leh dhaqdhaqaaqyo noocyo kala duwan ah. Waxaa loogu talagalay inay fududaato in la isticmaalo, hadana awood badan. Way yartahay cabirkeedu, laakiin wuxuu leeyahay astaamo badan oo horumarsan. LiVES wuxuu isku daraa waxqabadka waqtiga dhabta ah ee fiidiyowga iyo tafatirka aan tooska ahayn ee hal codsi tayo-xirfadeed leh.
Waa qalab aad u jilicsan taas oo ay adeegsadaan VJ-yada xirfadleyda ah iyo tifaftireyaasha fiidiyowga: isku darka iyo ka-beddelka boodhadhka kumbuyuutarka, isticmaal daraasiin wax ku ool ah waqtiga dhabta ah, goo oo ku hagaaji cutubyadaada tifaftiraha gooyaha, iskuna dheji iyaga oo isticmaalaya jadwalka isku dhafan.
Wixii farsamo ahaan aad u xeel dheer, codsigu waa qaab iyo muunad sax ah, waxaana laga noqon karaa meel fog ama qoraal lagu xakameyn karaa si loogu isticmaalo server video ah
Oo waxay taageertaa dhammaan heerarka ugu dambeeyay ee bilaashka ah.
1 Isbeddelada waaweyn ee LiVES 3.0
2 Sidee loo rakibaa LiVES-ka Linux?
Isbeddelada waaweyn ee LiVES 3.0
Qaabkan cusub ee LiVES 3.0 horumarin ayaa lagu sameeyay qalabka loo yaqaan 'PlayGL playback plugin', oo ay ku jiraan jilitaan jilicsan oo aad u jilicsan.
Tixraac tirinta xaaladaha waqtiga dhabta ah ee saameynta ayaa sidoo kale la hirgaliyay.
Taas ka sokow interface-ka weyn ayaa si ballaadhan dib loogu qoray, nadiifinta koodhka iyo sameynta waxyaabo badan oo horumarineed oo muuqaal ah.
Duubista ayaa la hagaajiyay markii matoorrada fiidiyowyadu socdaan, iyo sidoo kale hagaajinta mashiinka miiraha mashruuca, oo ay ku jiraan taageerada SDL2.
Waxaa lagu daray ikhtiyaar lagu beddelo amarka Z ee muusikada isku dhafan (lakabyada dambe ayaa hadda iskudhafan kara kuwa hore).
Isbeddelada kale ee ka dhex muuqda sii-dayntan waxaa ka mid ah:
Taageero lagu daray musl libc
U oggolow "Ku Filan" VJ / Pre-decode all frames
Summada dib-u-cusbooneysiinta loogu talagalay xisaabinta saldhigga inta lagu guda jiro dib u soo celinta (ka wanaagsan a / v sync).
Duubista maqalka iyo maqalka dibedda ah ayaa la hagaajiyay si loo wanaajiyo saxsanaanta loona isticmaalo wareegyada CPU-ga oo yar.
U wareejinta otomaatiga ah ee maqalka gudaha marka la galayo habka multitack.
Muuji xaalada saxda ah ee saamaynta (shidida / dabka) markaad muujineyso daaqada khariidada saamaynta.
Waxay tirtiraysaa xaaladaha jinsiyadaha qaarkood inta udhaxeysa nudaha maqalka iyo muuqaalka.
Hagaajinta soo dejinta fiidiyowga ee khadka tooska ah, cabirka clipka iyo qaabka ayaa hadda lagu dooran karaa iyadoo lagu daro xulasho casriyeyn ah
Sidee loo rakibaa LiVES-ka Linux?
Haddii aad rabto inaad ku rakibto tifaftiraha fiidiyowga nidaamyadaada, waxaan ku sameyn karnaa caawinta bakhaar. Waxaan kaliya u baahanahay inaan furno terminal oo aan ku fulino amarrada soo socda dhexdeeda.
Wixii Ubuntu ah iyo waxyaabaha la soo saaray, waxa ugu horreeya ee aan sameyn doonno waa inaan ku darno keydka nidaamkayaga:
Hadda waxaan u soconeynaa inaan cusbooneysiinno liiska meelaha keydka iyo codsiyada leh:
Ugu dambeyntiina waxaan ku dhejin karnaa arjiga iyo qaar ka mid ah waxyaabo dheeri ah amarka soo socda:
Hada kuwa isticmaala Arch Linux, Manjaro, Arco Linux iyo qaybinta kale ee ku saleysan Arch Linux, rakibaadda waxaa laga sameyn doonaa AUR iyadoo la raacayo amarka soo socda:
Iyadoo kuwa isticmaala Fedora, waa inay lahaadaan keydka RPMFusion oo awood u leh inay fuliyaan rakibaadda amarka soo socda:
Ugu dambayntii kuwa isticmaala OpenSUSE, rakibidda waxaa lagu fuliyaa:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Waxaa lasii daayay nooca cusub ee tifaftiraha fiidiyowga ee aan tooska ahayn ee LiVES 3.0